Dhimirka iyo Dhibaatooyinka ku gedaaman (Qaybtiii 2aad)
Tuesday October 03, 2017 - 10:29:12 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Qaybtii koowaad waxaynu si balaadhan uga soo wada hadalnay dhibaatada ku gadaaman dadka dadka la nool xannuunka dhimirka. Nadaafada dadka la nool
Qaybtii koowaad waxaynu si balaadhan uga soo wada hadalnay dhibaatada ku gadaaman dadka dadka la nool xannuunka dhimirka. Nadaafada dadka la nool xannuunka dhimirka oo liidata, faqooqid iyo rajo la’aan baahsan oo noloshooda laga qabo ayaa kamid ahaa dhibaatooyinka saameeya dadkan.
Waxa aynu qaybtan si balaadhan ugaga wada hadli doonaa dhibaatooyinka ay dadkani kala kulmaan xarumaha caafimaad ee lagu hayo. Sida aynu wada ognahay, iyada oo xannuunka dhimirku uu u baahan yahay daawooyin caafimaad oo lagula tacaalo dadka la nool, waxa badiyaaba aynu aragnaa iyaga oo kolba meel la gaynayo si loogu dabiibo iyada oo la ilaaway in ay jiraan dad iyo dawo loo adeegsado oo si lama huraana ugu shaqaynaya. Goobaha badanaa la geeyo dadkan waxa kamid ah cilaajyo nadaafadoodu liidato, guryaha dhexdooda oo aan ahayn meel qalbiga qofku ku xasilayo, iyo xarumaha loogu tala galay in lagu daaweeyo oo aan xirfad iyo aqoon la’aan awgeed si liidata ula dhaqma dadka marka laga reebo dhismayaasha iyo daawooyinka oo ku yar.